६ किलोमिटर सडक ३ वर्षदेखि अलपत्र, स्थानीयलाई यातना - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
६ किलोमिटर सडक ३ वर्षदेखि अलपत्र, स्थानीयलाई यातना
चैत २८, २०७४ 868 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
तीन वर्षअघि निर्माण सुरु भएको टेकु–शोभाभगवती मन्दिर जोडने सडकको काम अझै पूरा भएको छैन । स्थानीय सरकारको बेवास्ता र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण स्थानीयले यातना खेपनु परेको छ ।
एकीकृत अधिकार सम्पन्न बागमती विकास समितिले महादेवखोला दोभानसम्म ६ किलोमिटर निर्माण अघि बढाएको थियो । विष्णुमती खोला संरक्षण र ढलमुक्त बनाउने लक्ष्य राखे पनि त्यो अहिले अलपत्र छ ।
६ किलोमिटरमध्ये तल्लो र माथिल्लो खण्ड गरी ३/३ किलोमिटरमा बाँडेर काम सुरु भएको थियो । समितिले खोला संरक्षण र ढल व्यवस्थापनको ठेक्का लगाएको हो । निर्माणको जिम्मा पाएको लुम्बिनी गौरी पार्वती, कोन्ट्रेक जेभी तथा शर्मा, एपेक्स, कान्छाराम जेभीले निर्माण अलपत्र छोडेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु भएको काम आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर, समितिले ९ महिनापछि निर्माणको जिम्मा लिएर ठेक्का लगाएको थियो । हालसम्म ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको समितिले जानकारी दिएको छ ।
१ अर्ब लागतमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको सडक निर्माणमा अहिलेसम्म ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सडक निर्माण क्रममा खोलाको दुईतिर ढल राख्ने, पर्खाल लगाउने, घाट र पुरातात्विक वस्तु संरक्षण गर्ने काम भइरहेको आयोजनाका उप–प्रमुख योगेन्द्र चित्रकारले बताए ।